Porn-စွဲခံရသောမြီးကောင်ပေါက်များ (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
နျြ့ဘုရငျ့ Fairuz Izdihar(1 *), Fikry Ravi Fauzi(2), Diah Ayu အဘိဓါန် Aguspa Dita(3), Miskatyas Putri Aransih(4), Pukovisa Prawiroharjo(5), Elly Risman(6), Rizki Edmi အက်ဒီဆင်(7)
(၁) Muhammadiyah တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခဒေါက်တာ HAMKA
(၅) Cipto Mangunkusumo ဆေးရုံ
(၆) Kita dan Buah Hati ဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကြောင်းအရာသည်အင်ဒိုနီးရှား၌ ပို၍ လေးနက်သောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ထိုနေရာတွင်ကလေးသူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက် ၁,၆၀၀ ရှိ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့မှုရှိသည်ဟုသံသယရှိကြသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကြောင်းအရာများပျံ့နှံ့မှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အစိုးရကအမျိုးမျိုးသောကြိုးပမ်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဥပမာ - ညစ်ညမ်းသောသံသယဖြစ်ဖွယ်ဆိုဒ်များကိုပိတ်ဆို့ခြင်း။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအားထိတွေ့ခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုကြောင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုလည်းလူသိများသည်။ EEG (Edison, RE ။ , et al) နှင့် fMRI (Prawiroharjo, P. , et al) တို့နှင့်အတူသုတေသနရလဒ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကြောင်းအရာစွဲသည်ဟုသံသယရှိခံရသောကလေးငယ်များနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာဘာသာရပ်များအကြားကောင်းသောအယောင်ဆောင်ခြင်း၏ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရှိသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်စိတ်ပညာနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံရှုထောင့်မှဖြစ်ရပ်ဆန်းကိုဆွေးနွေးထားသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ electroencephalography၊ fMRI၊ ကောင်းသောအစီရင်ခံစာရေးသားခြင်း
Abidin, Zaenal, Fiona Fisabillia Lastina ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဆက်သွယ်မှုများအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုလူမှုဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional pada Siswa SMA Negeri 2013 Kota Magelang ။ သီရိ။ Diponegoro တက္ကသိုလ်
Anastasi, A & Urbina ။ (2007) ။ Tes Psikologi: Terjemahan ။ ဂျကာတာ: PT အင်ဒက်စ်
ဆိုဒ်များကိုပိတ်ဆို့ခြင်း၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈၊ https://kominfo.go.id/content/detail/1649/kemenkominfo-pemblokiran-situs-porno-tak-akan-dihentikan/0/sorotan_media တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
Capel ဝီလျံစီ, Bernard Caffrey ။ ဘိန်းဖြူစွဲသူများ၏နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများတွင်ပြFနာတစ်ခုအဖြစ်ကောင်းမွန်စွာရှာဖွေခြင်း။ Clemson တက္ကသိုလ်
Farrow, Tom F. D, Jenny Burgess, Iain D. Wilkinson, Michael D. Hunter Self- လှည့်စားခြင်းနှင့်အထင်အမြင် - စီမံခန့်ခွဲမှု၏ 2015 အာရုံကြော Correaltes ။ ရှက်ဖီးတက္ကသိုလ်
Febrinabilah, Rizki ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနားကြင်နာမှုအကြားဆက်သွယ်မှု ၂၀၁၆ ။ Hantan Resiliensi pada Mantan Pecandu Narkoba Dewasa Awal ။ ဂျကာတာ Yarsi တက္ကသိုလ်
Griffin, ဘာဘရာ, မှ Ian, G Wilson က။ ၂၀၁၂. ကောင်းမွန်သောအတု - ဆေးကျောင်းလျှောက်ထားသူများတွင်ကိုယ်တိုင်တိုးတက်မှု။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရေး။
Mahanani, Tri ၂၀၀၉ Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap K သည် Manajerial dengan မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှု၊ လူမှုရေးလိုလားမှု၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကတိက ၀ တ် sebagai Variabel Intervening ။ ဆူကာတာ။ Sebelas Maret တက္ကသိုလ်
ရှင်ပေါလု, Cornelia အေ, က Nicolas ဒဗလျူ Crost ။ Self- လှည့်စားခြင်းနှင့် Impression စီမံခန့်ခွဲမှုအကြေးခွံပေါ် Faking 2004 Effectsof ။ ဂျာမနီ။ Marburg တက္ကသိုလ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ https://nasional.tempo.co/read/768513/menteri-yohana-25-ribu-remaja-akses-pornografi-tiap-hari တွင်အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊
ညစ်ညမ်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈ တွင် https://id.oxforddictionaries.com/ တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအရေးပေါ်အခြေအနေ၊ ၂၀၁၈၊ အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈ တွင် https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/darurat-pornografi-kemenko-pmk-perkuat-koordinasi-pencegahan တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Setiawati, Farida Agus ။ 2012 ခုနှစ်တွဲဖက်နှိုင်းယှဉ် Sebuah မော်ဒယ်တူရိယာ Menggali Karakteristik Nonkognitif Siswa ။ Yogyakarta ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်
KPPPA စစ်တမ်းကိုအောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈ တွင် https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/17/03/2018/mengejutkan-survei-kpppa-sebut-97-persen-anak-sd-terpapar-pornografi တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်သောအင်ဒိုနီးရှားနံပါတ် ၄၄ Undang-undang ။
Van Hooft၊ Edwin AJ ၂၀၁၂ ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစစ်ဆေးမှုအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတုံ့ပြန်မှုပျက်ပြားခြင်း - Faking သောအခါတုန့်ပြန်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုနားလည်ရန် Eye-Tracking အသုံးပြုခြင်း။ အသုံးချစိတ်ပညာဂျာနယ်, အမေရိကန်စိတ်ပညာအသင်း
Widhiarso, Wahyu ။ 2011. လျှောက်လွှာများ Teori Respon Butir Untuk Menguji Invariansi Pengukuran Psikologi Guna Kep ယခင် Survei dan Seleksi Pekerjaan ။ Yogyakarta ။ Gadjah Mada တက္ကသိုလ်